သငျသညျလက်လီ၌အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်သည်အထိသင်ငရဲကြုံတွေ့ကြပြီမဟုတ် - သတင်း
သင်ဒီဇိုင်နာစတိုးဆိုင်တွင်အလုပ်လုပ်သည်ဖြစ်စေ၊ သင်၏ဒေသခံ Topshop တွင်ပါ ၀ င်သည်ဖြစ်စေလက်လီ ၀ န်ထမ်းတိုင်းနှင့်ဆိုင်သောရုန်းကန်မှုများဖြစ်သည်။
ကိုယ့်တစ်ဦး scientologist ဖြစ်ချင်တယ်
တော်တော်များများဘယ်နေရာမှာမနက်9နာရီမတိုင်မီက၎င်း၏တံခါးများဖွင့်လှစ်။ ဒါဟာပေးထားတယ် နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသင်သွားလာနေစဉ်အတွင်း၌အပြင်သို့တက်။ တက်နေသောစူပါစိတ်အားထက်သန်မှုသည်တုန်လှုပ်ချောက်ချားနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ သူတို့သည်လုံလောက်သောဆူညံသံများဖြစ်ခဲ့လျှင်သင်သည်တံခါးများကိုပိုမိုလျှင်မြန်စွာဖွင့်နိုင်သည်။
ငါတို့လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ စောလွန်းတယ်၊ အိမ်ပြန်ပြီးသာမာန်လူတစ်ယောက်လိုယဉ်ကျေးတဲ့နာရီကိုစောင့်ပါ။
ပျော်ရွှင်ပါစေဟုမျှော်လင့်ပါ။ သင်၏မန်နေဂျာက ၀ န်ထမ်းများပျော်ရွှင်နေလျှင်ဖောက်သည်များပိုမို ၀ ယ်သည်
ဘယ်သူမှမယုံကြဘူး၊ သင်ကဂျာကင်အင်္ကျီအသစ်တစ်ခုကိုရှာနေမယ်ဆိုရင်သေချာတာပေါ့၊ လက်တွဲချိတ်ဆွဲထားသူကသင့်ကိုပြုံးပြမယ်ဆိုရင်သင်ပစ်မထားဘူး။ သို့သော်၊ သင်သည်သင်၏မျက်နှာပေါ်တွင်နာရီပေါင်းများစွာအကာအကွယ်ပေးထားသည့်ပလတ်စတစ်သုတ်လိမ်းထားရမည်။
သင်အိမ်ပြန်ရောက်သောအခါလူတို့သည်ခွေးမျက်နှာကိုအနားယူနေသည်ဟုသင့်အားစွပ်စွဲကြသော်လည်းအမှန်တကယ်တွင်၎င်းသည်တစ်နေ့လုံး perky တည်းသောအားထုတ်မှုမှသင်၏နှုတ်ခမ်းများပြိုကျသွားခြင်းသာဖြစ်သည်။
သင်သည်သင်၏ရပ်တည်ချက် / overရိယာကိုကျော်ပြီးခုခံကာကွယ်မှုဖြစ်လာလိမ့်မည်
သငျသညျ, ဒီအာကာသကိုကြည့်ရှုရန်တစ်နေ့ရှစ်နာရီဖြုန်း, ကသပ်သပ်ရပ်ရပ်နှင့် presentable သေချာအောင် - နှင့် လူအချို့ ကိုယ့်ဂရုမစိုက်ဖို့မထင်ကြဘူး။
အတိတ်လမ်းလျှောက်သူဖောက်သည်များအနေဖြင့်အရာရာတိုင်းကိုကိုင်တွယ်ကိုင်တွယ်ရန်လိုသည် လှသောအဆင်း မျက်နှာပြင်။ သင်၏မျက်လုံးတစ်စုံတစ် ဦး ကိုသင်တွေ့မြင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းသည်အေးဆေးတည်ငြိမ်ရန်ရုန်းကန်နေရသည်။
ဒါပေမဲ့သူတို့မလွှဲမရှောင်သာအရာအားလုံးကိုရှုပ်ထွေးစေပြီးနောက်အနည်းဆုံးသင့်မှာအလုပ်ရှုပ်နေ ဦး မှာပါ။
သူတို့ကအားလုံးအပြုံးများနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုအတွက်လာ, oh သူတို့ချစ်စရာနှင့်ကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောဖြစ်ကြပြီးအိုးဘုရားသခငျသညျသူတို့ထဲကတ ဦး တည်းပဲသူတို့ကိုယ်သူတို့ pissed ။
မကြာခင်မှာပဲသူတို့စေးကပ်သောလက်ချောင်းများသည်သင်၏ထုတ်ကုန်များကိုစင်ပေါ်မှဆွဲထုတ်လိုက်သည်၊ သူတို့၏ဆွဲကြိုးများမှအဝတ်များကိုဆွဲဆုပ်ပြီးကြမ်းပြင်ပေါ်ပစ်ချလိုက်ပြီးပရမ်းပတာဖြစ်သွားသည်။ ထိုအခါသူတို့သည်ငိုလိမ့်မည်, သင်သည်သူတို့နှင့်ပူးပေါင်းချင်ပါလိမ့်မယ်။
Lucy ကဒီဝတ်စုံကို Cosmo မှာတွေ့ခဲ့တာကအရမ်းကိုချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ သူမသည်သူမ၏မိန်းကလေးများညဥ့်အဘို့အလိုသည်။ သူမဒီဝတ်စားဆင်ယင်မှုကိုခံယူဖို့အတွက်မြို့ထဲကနေမင်းရဲ့စတိုးဆိုင်ကိုသွားပြီးသင့်မှာစတိုးဆိုင်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်၊ မင်းမှာထားသင့်တာပေါ့။
ကံမကောင်းစွာ Lucy အတွက်အခြားမိန်းကလေး ၂၀၀ ခန့်သည်သူမနှင့်အတူတူပင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသောကြောင့် ၀ တ်စုံပျောက်သွားသည်။ မဟုတ်ပါ။ Lucy ကမျှမျှတတရှိတယ်လို့မထင်ပါဘူး။ သင် Lucy ကိုသင်မှော်ဆရာမဟုတ်ကြောင်းပြောပါ၊
Lucy ကသင်၏မန်နေဂျာနှင့်စကားပြောရန်တောင်းဆိုသည်။ Lucy ကိုချွတ် fuck ဆိုတဲ့နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျအထဲက run ချင်ပါတယ် Lucy ကိုပြောသည်။ မင်းရဲ့မန်နေဂျာကလူစီကိုမင်းကိုထွက်ပြေးမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ သင်ပြောနေတာကိုသင်ယောက်ျားများသိနေသလိုပဲ။
သူမသည်စစ်ဆေးမှုကိုနှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ရန်သင့်ကိုစတော့ရှယ်ယာအခန်းထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားဆဲဖြစ်သည်။ သင်အုပ်စုဖွဲ့စကားပြောခြင်းကိုထိုနေရာတွင်ငါးမိနစ်မျှနေခဲ့ရသည်ဟုသူမပြောလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါဟာသူမဖြုန်းနေသင့်ရဲ့အချိန်မဟုတ်ပါဘူး။
တချို့ကလူသည်သူ၏ဖိနပ်အရွယ်အစားစတော့ရှယ်ယာဖြစ်ခြင်းမဟုတ်အကြောင်းကိုညစ်ညမ်းသောအော်ဟစ်နေပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်ရိုးရိုးသားသားသူကပြောတယ်မပေးနိုင်ဘူး။ သင်၏ ဦး ခေါင်း၌သင်သည်ဘာလီကျွန်းရှိကမ်းခြေတစ်ကျွန်းပေါ်တွင်ရှိသည်။ သင်ပင်သူ့ကိုနောက်တဖန်မကြားနိုင်ပါ။ သင့်တော်သည့်အချိန်တွင်သင်ခေါင်းညိတ်ရုံနှင့်မန်နေဂျာကိုပြောပြလိမ့်မည်ကိုစိတ်ချပါ။
သငျသညျလိမ့်မည်မဟုတ် - သင်ရုံသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူချိုးအခန်းထဲမှာသူ့ကိုရယ်မောပါလိမ့်မယ်။ သူကသိရန်မလိုအပ်ပါဘူး။
ဒေါသထွက်နေသောဖောက်သည်များကလှည့်ပတ်နေသည်နှင့်သင်ရိုးရိုးသားသားပဲရပ်တည်မှုကိုစိတ်ကျေနပ်မှုရသောအခါစတော့ရှယ်ယာအခန်းတွင်သင့်ကျောရှိသည်။ သင်သေတ္တာများသို့မဟုတ်အဝတ်အစားများထိန်သိမ်းများထဲတွင်နှင့်မိနစ်အနည်းငယ်အဘို့အဖုံးကွယ်နိုင်ပါတယ် ရှူ ။
Smirnoff ၏ပုလင်းတစ်ချောင်းကဲ့သို့ကျဆင်းသွားသောထုတ်ကုန်များမှကုတင်တစ်ခုကိုဖန်တီးခြင်းသည်သင့်ကိုတစ်ချိန်ကအကြိမ်ကြိမ်ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ ရက်အနည်းငယ်အကြာသင်ပိုမိုလိုအပ်သည့်အရာကိုသင်မသိပါ။
တခါတရံသူတို့ကစာတန်ရဲ့ cranky step- ဆိကဲ့သို့ဖြစ်ကြပြီးသင်သည်သူတို့၏မျက်စိသင်၏စိတ်ဝိညာဉ်သို့လောင်ကျွမ်းခံစားရသည်။ တစ်ခုခုကိုလမ်း, သူတို့ဖြစ်ကောင်းအရက်မူးနှင့်ခရစ်စမတ်ပါတီမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့တစ် ဦး tit လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသေးငယ်တဲ့အရာပါပဲ။
အလေးအနက်ထားပြောရရင်တော့ဂျင်းဘောင်းဘီတစ်ချောင်းပဲ။ ဒါကနောက်ကျောကိုပြန်တင်ဖို့မခက်ဘူး။ ယခုငါစုံတွဲတိုင်းကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လုပ်နေတာနာရီပေါင်းများစွာကြာပြီ၊ အဲဒါကငါ့ကိုရူးသွပ်စေလိမ့်မယ်။
ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုအိပ်ရာ ၀ င်စေပုံ
One Dance ကသီချင်းကောင်းတစ်ခုလား။ မှား တူညီတဲ့အပုဒ်ထပ်ခါထပ်ခါကစားနေကြသည်အဖြစ်ကမိနစ် 30 တိုင်းတက်လာမယ့်အခါ ကျော်လွန်, နှိပ်စက်ညှင်းပန်းမှုပုံစံအချို့သည်အလွန်ထိရောက်နိုင်ပုံကိုသင်စတင်နားလည်လာသည်။
House party Spotify အစုံသည်သင့်အတွက်ယခုဖျက်ဆီးခြင်းခံရသည်။
သင်၏ဘ ၀ တွင်လေကြောင်းပြခြင်းကိုသင်ဘယ်သောအခါမျှတန်ဖိုးထားမည်မဟုတ်ပါ
အဘယ်ကြောင့်ဤမျှလောက်ပူပြင်းလွန်းဒီမှာ? ငါကစာတန်ထဲမှာရှိလား (အဖြေ - ဖြစ်နိုင်သည်။ )
ဖောက်သည်များကသင့်အားအရာရာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သည်
ဟင့်အင်း၊ ဒီ Teddy ကိုတရုတ်မှာလုပ်ခဲ့လားမသိဘူး။ မဟုတ်ပါ၊ သားမွေးဖြင့်ဘာလုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ မဟုတ်ဘူး၊ မင်းရဲ့တူမကကြိုက်မလားမသိဘူး
သငျသညျသူမ၏အဘယျသို့နောက်ထပ်ရနိုင်မည်နည်း Gray ကဒီစတိုးဆိုင်ထဲမှာ 10000 ကျော်ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်ရှိပါတယ်။ မင်းရွေးပါ
စတော့ရှယ်ယာအခန်းရှင်းလင်း ဟုတ်ပါတယ် စျေးအိတ် ၂၀၀ အသစ်? ကောင်းလိုက်တာ!
ငါပထမ ဦး ဆုံးအကြံပြုချင်ပါတယ်ဆိုလိုပေမယ့်ငါတို့ရှိသမျှသည်အကျင့်ဆိုးရှိသည်။ နာရီဝက်တိုင်းအပို ၅ မိနစ်ကြာအနားယူရန်တစ်နည်းနည်းဖြင့်တတ်နိုင်သောဆေးလိပ်သောက်သူများကိုသင်လည်းမနာလိုဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်စတင်ရန်စဉ်းစားရန်လုံလောက်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်ငါသာငါးမိနစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်! ကြမ်းတမ်းတဲ့ shit အမျိုးသမီး။ ငါမင်းကိုပေါ်ရှိရှပ်တာကိုမပိတ်ဖို့မတွန့်ဘူး။
သငျသညျလူတို့ကိုသိုးထိန်းတစ် ဦး နှင့်တူထုတ်လွှင့်ခြင်းဟူသောအချက်သည်သဲလွန်စတစ်ခုနှင့်မလုံလောက်ပါကသင်မီးကိုရိုးသားစွာပိတ်ထားနိုင်ပြီးလူများကိုသော့ခတ်။ သူတို့ထွက်ခွာရန်အချိန်တန်ပြီဟုသူတို့မသိပါ။
ငါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မနက်ဖြန်ပြန်မိပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်ငါ့ကိုပြန်လာမှလာကြည့်ဖို့စိတ်အားထက်သန်လျှင်။ ငါအမြဲတမ်းအဖြစ် ... ဒီမှာဖြစ်လိမ့်မယ်